Shuruudaha lagu xidhay murashaxiinta cusub ee u tartamaya Gole-yaasha Deegaanka iyo Wakiilada Somaliland | Berberanews.com
Home WARARKA Shuruudaha lagu xidhay murashaxiinta cusub ee u tartamaya Gole-yaasha Deegaanka iyo Wakiilada...
Shuruudaha lagu xidhay murashaxiinta cusub ee u tartamaya Gole-yaasha Deegaanka iyo Wakiilada Somaliland
Hargeysa (Berberanews) Muddo 100 maalmood ah, ayaa ka hadhsan wakhtiga loo qorsheeyey in ay dalka ka qabsoonto doorashooyinka muddo dhaafay ee Wakiillada iyo deegaanka, oo la filayo in ay dhacaan 31 bisha May oo maanta 100 maalmood oo keliya innaga xigaan.
Xisbiyada iyo beelaha ayaa ku mashquulsan kala saarida Murrashaxiinta Goleyaasha Wakiillada iyo Deegaanka, iyada oo maalmihii u dambeeyey Xisbiyadu aqbaleen murrashaxiin reerahoodu u gudbiyeen Xisbiyada.
Komishanka Doorashooyinka, ayaa soo saaray Shuruudaha looga baahan yahay Murrashaxiinta Goleyaasha Wakiillada iyo Deegaanka, kuwaas oo Xeerka guud ee doorashooyinku waajibiyey in ay buuxiyaan xubnaha tartamaya.
Shuruudahan, komishanku soo bandhigeen, ayaa ah kuwan hoos ku qoran:
Shuruudaha looga baahan yahay musharaxa golaha wakiillada Somaliland
Shaqaalaha dawladda iyo ciidamada Qaranka ee kala duwan rabbana inay u tartamaan golaha wakiillada iyo degaanku waa inay is casilaan 90 cisho ka hor maalinta doorashada loo asteeyay.
Kaadhka dhalashada ee muwaadinimada
Kaadhka codbixiyaha oo ah goobta uu ka tartamayo.
Caddayn in aanay dadiisu ka yareyn 35-sano
Warqad caafimaad oo caddaynaysa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaan u gudan karo xilkiisa
Shahaado dugsi sarre ah
Warqada danbi la’aanta
Warqad caddayn shaqo ka tagid ah hadduu shaqalaha dawladda ama ciidamada Qaranka ee kala duwan ka tirsan yahay.
Caddayn ah in uu bixiyay 40 millyan oo Somaliland Shilin ah, oo debaaji ah isla markaana aan celis lahayn, laguna bixiyo xafiiska cashuuraha berriga ee wasaaradda maaliyadda.
In uu saxeexay xeerarka anshaxa iyo doorashooyinka
Waa inuu keeno codsi ah inuu u tartamayo doorashada, caddeeyana inuu buuxiyay shuruudaha xeerku qoray.
Murashaxa isku soo sharaxay golaha wakiillada amma golaha degaanka, waxaa uu xaq u leeyahay in uu ka tanaasulo, balse waa inuu qoraal rasmiya u soo gudbiyo xisbigii uu ka sharaxnaa iyo guddida doorashooyinka Qaranka ugu yaraan 40 maalmood ka hor taariikhda cod-bixinta
Shuruudaha looga baahan yahay musharaxa golaha deegaanka ee Somaliland
Kaadhka dhalashada ee muwaadinimada.
Caddayn in aanay da’diisu ka yareyn 30-sano.
Waraaqda danbi la’aanta.
Shahaado jaamacadeed, heerka koobaad ee degree, ah musharixiinta degmooyinka
Darajada A, murashixiinta derajada B iyo C na caddayn saddex sano ah ayaa looga baahan yahay.
Caddayn cashuur bixiye inuu ka yahay degmada uu ka sharaxan yahay
Hanti mood ama nool, oo uu ku leeyahay degmada uu ka sharaxan yahay
Waa inuu keeno warqad caddaynaysa inuu bixiyay shan iyo toban milyan oo Somaliland shilin ah, degmooyinka derajada A, 7-milyan, derajada B iyo C 4-milyan.
Warqad caafimaad oo caddaynaysa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaan ugudan karo xilkiisa
Waa inuu keeno codsi ah inuu u tartamayo doorashad, caddeeyana inuu buuxiyay shuruudaha xeerku qoray.
Murashaxa isku soo sharaxay golaha degaanku amma wakiiladdu waxaa uu xaq u leeyahay in uu ka tanaasulo, balse waa inuu qoraal rasmiya u soo gudbiyo xisbigii uu ka sharaxnaa iyo guddida doorashooyinka Qaranka ugu yaraan 40 maalmood ka hor taariikhda cod-bixinta.
HALKAN KU DHUFO OO DAAWO FARIINTA: https://www.youtube.com/watch?v=mAq9tZBADig
Previous articlePuntland maxay ka tidhi Xaaladdii xalay ee Muqdisho?
Next articleTurkiga oo ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee Maraykanka u dhaxaysa